AT&T: Iib Dhamaystiran oo ay ku xigto Gaarsiin Musiibo ah | Martech Zone
AT&T: Iib Dhamaystiran oo ay ku xigto Gaarsiin Musiibo ah
Jimcaha, Agoosto 31, 2007 Axad, Sebtembar 2, 2007 Douglas Karr
Markii aan go'aansannay inaan ka guurno xafiiskeenna oo aan u guurno mid cusub, dadkii ugu horreeyay ee aan waco wuxuu ahaa AT&T. Waxba ugama muhiimsaneyn talaabadan marka loo eego hubinta fakiskayaga iyo khadadka taleefankeena inay socdaan.
Kadib codad dhowr ah, wakiilka ayaa si deg deg ah u qabtay taleefanka wuxuuna ka jawaabay su'aal kasta oo aan qabo. Waxay ahayd mid wacan, aqoon leh, oo aad u caawinaysa. Waxaan go'aansanay inaan u dhaqaaqno Sabtida iyadoo taleefannada cusub ay galayaan Jimcaha. Ahaanshaha dhammaadka wiigga, waxaan u maleynay inay tartiib tartiib ku noqon doonto taleefannada mana saameyn doonto macaamiisheenna iyo rajadayada.
Waxaan haysanay lambar 1-800 ah, farabadan oo xariiqyo isdaba-marin ah, khad fakis oo qaas ah, iyo DSL-heer-ganacsiyeed ah meheraddeenna yar-yar. Xafiiska cusub, waxaan isku darnay gelitaanka internetka iyo kireyskeena maaddaama dhismuhu ku yaallo qaar ka mid ah qalabka isku xirka muhiimka u ah shirkad leh tan ballaadhkeed.
Waxaan haynay lambarka 1-800 laakiin waxaan u baahanahay inaan helno lambarro taleefan cusub maaddaama aan ku suganahay qayb ka mid ah magaalada, sidaa darteed waxaan dooranay muddo 3 bilood ah oo fariin bilaash ah lagu soo diray khadadkii hore si aan ugu sheegno macaamiisheenna lambarrada taleefannada cusub . Waxaan ku xirnay wicitaanki lambarka tigidhka si aan ugu tixraacno haddii ay jiraan wax dhibaato ah.
Halkaas ayuu dhammaystirku ku dhammaaday
Qiyaastii toddobaad ka hor guuritaankeenna, DSL-gu wuu baxay. Ka dib maalin iyo badh markii aan lahadalnay AT&T, anagoo balanqaadyo leh in ay ahaan doonto kahor dhamaadka ganacsiga (maalin kahor), ayaan aakhirkii dib ulaabanay DSL-gii. Way ku adag tahay shirkadda tiknoolajiyada khadka tooska ah koox ka socota iibka iibinta iyadoon wax marin ah laga helin. Inta badan qof walba wuxuu ka shaqeeyay guriga halkii uu sugi lahaa.
Nasiib wanaag annaga, AT&T waxay laheyd siyaasad lacag celin qurux badan. Kumanaanka doolar ee ganacsiga lumay waxaan helnay $ 119 amaah ah biilkeena.
Xitaa way ka sii adag tahay kooxda iibka dibedda inay iibiso la'aanteed telefoonada. Taasi waa dhab wixii dhacay maalin kadib. Waxay u muuqataa in qaar ka mid ah 'cillad' loogu talagalay guuritaankeena degdeg ah adeegyadu waxay ku istaagaan DSL iyo khadadka taleefanka. Waxaan waayin telefoonno maalin kale iyo badh ah. Hadda xoogaa waan xanaaqsanahay.
AT&T waxay dirtay farsamo yaqaan adeeg weyn ah oo la shaqeeyay nin kale oo banaanka ka yimid si khadka DSL dib loogu soo celiyo. Markii telefoonnadii ugu dambayntii dib loo soo celiyey DSL-du mar labaad ayey baxday. Lammaanayaal kale ayaa socda laakiin Patrick wuu adkaaday oo wuxuu dib noogu celinayaa 100%.
Markii aan saaka u soo anba baxay shaqada, waxaa la ii sheegay in DSL ay mar kale shaqeysay. Looma baahna xitaa inaad cidna wacdo, sax? Lamaane labo ah ayaa kaararka Sprint kulahaa xafiiska waxayna ahaayeen wadnaheena wadnaha ilaa aan kaheleyno xafiiska cusub (halkaasoo shabakadu horey u jirtay).
Khadadka taleefanadu sidoo kale way hooseeyaan… nooca. Hadaad wacdid way garaacayaan, wayna garaacayaan. Xusuusnow fariintii aan ku dalbaday lambarada taleefan ee cusub? Taasi wali ma shaqeyneyso. Markaa hadda ma hayno telefoonno iyo DSL toona. Waxaan rabaa inaan sariirta ku noqdo.
Taabadalkeed, waan wareejinay alaabteenii oo dhan waxaanan u raray nidaamka PBX meeshii cusub. Dhowr saacadood ka dib, dib-u-hagaajiyeheenna AT & T ayaa soo muuqda. 15 daqiiqo kadib, wuxuu dhahaa:
Waxbaa ka khaldan qadka markaa waa inay soo qaadaan dayactirka "fiilada" si ay u arkaan waxa socda. Wuxuu maqnaan lahaa berri ayaa la ii sheegay. Waqtigan xaadirka ah, Agaasimahayga Guud ayaa i soo booqda wuxuuna hubiyaa dhaqaaqa. Mahadsanid, isagu wuxuu ku jiraa qolka sida aniga la ii haayo oo la iigu sii gudbiyo qofba qofka kale, kan xiga, kan xiga. Kala-guur kasta waxaa la i weydiiyaa caddeyn ah inay tahay koontadayda (3dii lambar ee ugu dambeysay biilka) iyo waqti ka waqti, waxaa la i weydiiyaa lambarrada dalabka adeegga (Waxaan haystaa laba hadda… midna waa dhaqaaq, midna dayactirka) .
Maamulahaygu wuu i dhagaystaa markaan si xeeladeysan ugu celinayo usbuucii dhibaatooyinka ee AT&T - oo aan ku cabirayo inta iib, intee ganacsi, iyo kalsoonida intee le'eg ee naga lumisay usbuucii la soo dhaafay macaamiisheenna iyo rajooyinkeena Waxaan la yaabanahay xaqiiqda ah inaan awoodo inaanan qaylin ama cuss, sida aan ku sifeeyo - faahfaahin badan - usbuucii foosha xumaa ee AT&T ayaa i siisay. Xusuusnow, waa toddobaadkeygii saddexaad ee shaqada. 🙂
Waxaan labadeenaba la yaabanahay xaqiiqda ah in wadahadal kasta oo lala yeesho qof taleefanka uu ku dhamaado, "Ma dhihi laheyd inaad ku qanacsan tahay adeegga aad maanta heshay?". "Maya" waa jawaabtayda soo noqnoqota.
Ma waxaad rabtaa warka wanaagsan ama warka xun?
Hadda waxaan haystaa farsamo yaqaan sare oo hadda ku jira dhismaha kana shaqeynaya dhibaatada fiilada. Halkan wuxuu joogaa saacado kooban hadda laakiin wuxuu shaqeynayaa khadadka taleefannada. Dabcan, si aan ugu socono dariskeena PBX waa $ 25 15kii daqiiqaba (maxaysan u dhihin kaliya $ 100 / saac?).
Wuxuu yidhi, "Ma waxaad rabtaa war wanaagsan ama war xun?".
"War wanaagsan, fadlan.", Waxaan ku jawaabayaa.
Wuxuu arimahaa ka helaa taleefoonka dhismaha ee jira wuxuuna igu dhahaa "war wanaagsan ma jiro, ma jirto wado lagu kiciyo khadadka."
MAYA qaadan maayo jawaab.
Waxaan haynaa ilaa 100 fiilooyin CAT5 ah oo u kala gooshaya xarunta xogta iyo xafiiskayaga sidaas darteed waxaan kor u qaadayaa dhowr barxadood oo waxaan raadiyaa halka ay marayaan. Waxaa jira dariiqa-marinka ee gidaarka gidaarka iyo silsilad dhibic ah oo udhaxeysa iyada iyo qolka ay khadadka taleefanku ka soo galaan. Waa khad toosan oo 30 ilaa 40 cagta ah. Wuu tagaa oo wuxuu fiilada ka soo saaraa gaarigiisa wuxuuna ordayaa qiyaastii 100 fiit oo xarig ah.
Waa 9PM oo hadda waxaan leenahay khadadka taleefanka tooska ah ee dhismaha. Waxaan kaliya sugayaa farsamayaqaanku inuu dhammaystiro shaqadiisii ​​ugu dambaysay - waxay i siisay waqtigii aan ku qori lahaa qoraalkan dhan. Khadadka taleefannada ayaa hadda ku dhegan nidaamka PBX.
Berri waxa kaliya ee aan sameeyaa waa inaan helo fiilo dheeri ah iyo RJ11 jacks oo waxaan ka sameyn karaa boodboodka jaakadaha cusub ilaa nidaamka PBX si aan taleefano ugu helno Talaadada.
Taasi waa, ka dib markaan dhaqaaqno. Waxaan aadayaa subaxnimada hore ee berri si aan u kormeero dhaqaaqa xafiiska. Kooxdu mar horeba wax walba way xirxireen, marka guureyaashu waa inay u baahan yihiin oo keliya inay u dhaqaaqaan berri. Wali waxay noqon doontaa maalin dheer waan hubaa.
Waxaan hubin doonaa inaan 100% la soconno taleefannada dhammaadka ganacsiga berri. Maanta waxaan dhigay shabakadeena, silig amni leh, mashiin daabacan, xarun, waxaanna ka xariiqay dhamaan dhudhunyada ka soo baxa qeybta dhexe ee balastarka. Waxaan sidoo kale ku xiray dhammaan khadadka taleefanka laga soo bilaabo qaybta balastarka illaa nidaamkayaga PBX. Marka laga reebo AT&T, waxaan helay tan oo shaqo ah oo la qabtay.
Maalinta Talaadada, waxaan taleefanka kula hadli doonaa AT&T si aan u arko sababta aan ugu sii haayo ganacsigeena iyaga. Waxyaabaha kaliya ee aan ku ogaaday inay si hufan ugu shaqeeyaan waa:
Jooji iibinta waxa aadan geyn karin, AT&T. Sidee ayay u adkaan lahayd inay:
Wicitaan si aad u xaqiijiso ka hor inta aadan jarin DSL-keena?
Wac si aad u xaqiijiso ka hor inta aadan jarin khadadka Telefoonkeena?
Wicitaan si aad u xaqiijiso ka hor inta aadan jarin DSL-keena (markii labaad)?
Wac si aad u xaqiijiso ka hor inta aanad jarin DSL-kayga (markii saddexaad)?
Farsamo yaqaan khibrad leh ma ila kulmay kahor taariikhda guuritaanka si aan u balaadhiyo dhismaha cusub una dhex maro nidaamka shaqada? Waxaan si farxad leh u bixin lahaa $ 25 / saacaddii 15 daqiiqo taas!
Waa 9PM. Farsamadii waa la qabtay wuuna ka shaqeeyey dabadiisa si uu u hubiyo inaan faraxsanahay. Waan ku faraxsanahay isaga, waa wax aad u xun shirkadiisa, in kastoo. Gurigay u socotaa Waxaan ubaahanahay inaan halkaan ku soo laabto 11 saacadood guureyaasha waxaanan gurigayga ku wataa daqiiqad dhan 45 daqiiqo.
Waxaan u maleynayaa inay tahay sababta ay ugu yeeraan "Maalinta Shaqaalaha Toddobaadka"!
UPDATE 9/1: Lambarka 1-800 wali wuu garaacayaa nambarkii hore ee taleefanka farrintiina kama soo noqon. Kadib markii aan lahadlay kooxda 1-800, waxay umuuqataa in qofna weligiis amar shaqo uusan saarin si xariiqaas dib loogu laabto. Kadib markaan lahadlay 4 qof oo kaladuwan, waxaan helay Injineer ka talaabaya taariikhda amarka (maalinta ugu horeysa ee shaqada, marka waxay noqon laheyd Talaadada soo socota) si loo helo nambarka 1-800 ee maanta shaqeynaya.
Waxay umuuqataa 24 saacadood oo kale kahor intaan ladaarin fariinta. Waa inay dirtaa a FAX si ay u daarto Taah.
UPDATE 9/2: Gelinkii dambe ee shalay waa inaan si qalad ah ugu xirnaa Wizard of Telephony. Waxaan aaminsanahay in magaceedu ahaa Demetria - laakiin wax kasta oo kale way shaqeysay! Xitaa waxaan goob joog u ahaa wadahadal ay la yeelatay wakiil kale halkaasoo ay ka bilawday ka shaqeynta nambarkii shaqada ee 1-800 sida uu u gudbiyay Talaadada soo socota. Way nala joogtay galabnimadii oo dhan illaa ay ka heshay fariinta gudbinta sidoo kale. Qofkasta oo Demetria ay tahay - AT&T waxay ubaahantahay inay iyada masuul ka ahaato fasalka "sida loola macaamilo macmiil"!
Waad ku mahadsan tahay wanaag inaan diyaar noqon doono Talaadada!
Qaar ka mid ah Calaamadaha Google Map
Agoosto 31, 2007 saacaddu markay ahayd 8:38 PM
War ninyahow! Ganacsi kasta oo caadi ah ayaa soo jiidaya dhammaan joogsiyada si loo furfuro cillad-darrada adeegga ee baaxaddan.
Dhibaato dad badan inta badan shirkadaha waa weyn sida AT&T ayaa ah inay u maleynayaan inaysan u qalmin waqtigooda inay la qabsadaan wax kasta oo aan si sax ah ugu habboonayn nidaamkooda cookie-cutter. Hayso xaalad ka dhacda wax ka baxsan sharciyadooda la filayay oo waa lagugu qasbay.
Waxaan u maleynayaa inay u maleynayaan inay weyn yihiin oo meheraddaadu aysan qusayn iyaga. Waxaan ka xumahay tiknoolajiyada keli ah ee ay u direen meeshaada. Waxaan sharadyaa inaysan u sheegin inuu u shaqeyn doono xilli dambe Jimcaha ka hor fasaxa fasaxa.
Agoosto 31, 2007 saacaddu markay ahayd 9:47 PM
Waan kula socdaa, Chris. Tiknoolajiyadda adeegga ee caawa igu xirtay waxay qabatay shaqo badan waxayna ahayd nin runtii aad u fiican. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inuu waqti u qaatay inuu isku dayo inuu saxo arinta halkii uu ka sii deyn lahaa sida farsamayaqaankii ugu horreeyay oo kale.
Agoosto 31, 2007 saacaddu markay ahayd 8:56 PM
Ma Bell mar kale at. Weligay, WELIGABA ma maqal eray wanaagsan oo ku saabsan adeegga DSL. Maahan dhanka tiknoolajiyada, kama ahan dhanka adeegga. Marwalba waxaan lajoogaa nin adeeg bixiya aniga lafteyda, oo uu kujiro xiriirkeyga taleefanka VoIP. Ilaa hadda, wax dhibaato ah ma jiraan. Waana hubaa inay taasi abaal u tahay nidaamka fiilooyinka dhawaaqa - hal silig naxaas ah, hal il oo wax walba laga helo. Dabcan, ma sugayo koronto age yikes!
Agoosto 31, 2007 saacaddu markay ahayd 9:49 PM
Si la yaab leh, waxaan ku haystaa DSL oo leh AT&T guriga oo wuxuu ahaa mid adag dhagaxa 2 sano iyo badh. Waan ku faraxsanahay inaanan weligay u yeedhin isbeddel ku yimaada adeegga, in kastoo!
Sep 1, 2007 at 3: 45 AM
Taasi waa NAXDIN iyo cabsi. Ma weydiisanaysaa wax magdhow ah? Runtii waxaan rajeynayaa in tani ay hesho xoogaa caymis wanaagsan oo qof jooga AT&T uu arko tan.
Waxaan rajeyneynaa inaad nasiib wacan kuhesho inta kale ee dhaqaaq.
Sep 1, 2007 at 6: 28 AM
Maxaa qasan. Waxay ka dhigeysaa nooc ka mid ah marin-u-helidda wireless-ku meel-gaadhka ah mid fiican, miyaanay ahayn? In kasta oo xitaa taasi aysan marna ka hor istaagi doonin karti-darrada inay wax ka xidhaan waqtiga ku habboon wrong
Waan ka xumahay inaad bilow aad u xun ku soo qaadatay muddo dheer - loooonggg - isbuucaan.
Sep 1, 2007 at 1: 05 PM
Waxaan ku daray cusbooneysiinta 9/1 maanta.
Sep 1, 2007 at 4: 38 PM
Tani waxay ku qaadaysaa "ninka cusub inuu helo shaqada wasakhda ah" illaa heer cusub! Waxaan rajeyneynaa inaan wali ku arki karno berri!
Sep 1, 2007 at 9: 00 PM
Katie iyo aniga wali waxaan qorsheyneynaa joogitaanka.
Qaar ka mid ah superhero aan magac lahayn oo ka tirsan AT&T ayaa naga caawiyay xalinta arimaheena ugu dambeeya galabta. Waa inay ka shaqeysay koontadayada 4 ama 5 saacadood oo toos ah. Hal mar, ayay kula shirtay qof kale taleefanka waxayna u sheegtay inay qorto amarka shaqada wayna dhameystiri doontaa INTAAN taleefanka ku wada jirnay. Ma garanayo cidda ay ahayd, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay inay ku dhacday inay taleefanka qabato!
Sep 1, 2007 at 11: 22 PM
Haa! Waxaan rajeynaynaa inay hesho mushaar dheeri ah oo ah fasax usbuuc dhammaad ah. Oo aan ugu hambalyeeyo sii wadista luminta culeyska!
Sep 2, 2007 at 9: 09 PM
Hey Doug wuu ku faraxsan yahay in dhammaantood ay soo shaqeeyeen dhammaan dhibaatooyinkii naxdinta lahaa ka dib. Waan hubaa inaan dhamaanteen heysanno sheekooyinkeena naxdinta leh inaan sheegno laakiin kuwaaga dusha sare kuwa badan oo aan maqlay ama aan ku lug lahaa! Nasiib wacan halkan ka dib.